China Infrared Thermal Imaging Array Sensor Module Noncontact Temperature Fandrefesana YY-32A mpanamboatra sy mpamatsy | Masoandro
Famaritana hafanana tsy dia mifangaro hafanana tsy mitongilana YY-32A
Ny maodelin'ny sary mafana dia singa fototra ao amin'ilay suite. Amin'ny alàlan'ny interface fampiasa plug-in man-masinina FPC-15 na 2.0-10 mba hifandraisana amin'ny tontolo ivelany dia miovaova ny vokatra ary avo ny valiny.
YY-32A infrared mari-pana mari-pana mari-pahaizana modely dia sary mafana sy ny mari-pana fandrefesana mari-pana miorina amin'ny 32 lattice infrared sensor. Ny modely dia misy modely sary infra red 32 A, tontonana fanaraha-maso solosaina "YY-S GUARD". Ny module dia afaka miasa tsy miankina hamita ny sary mafana sy ny fanaraha-maso ny mari-pana, ary afaka manasaraka sy mampifandray ny rafitra interface. Izy io dia azo faritana ho toy ny andiany kely misy andian-tsary misy infra red amin'ny vokatra ao amin'ny mpitarika.
Background'ny monitor YY-SGUARD PC:
Fanapahan-kevitra: 32 * 32;
Halavan'ny halavan'ny lava-bato: 8-14 μm
Faritra fandrefesana ny mari-pana:
Karazana ankapobeny: -20 - 500 ℃
Karazana manokana 1: 0 - 100 ℃
Karazana manokana 2: 10-50 ℃
Karazana ankapobeny: ± 2 ℃ na ± 2% amin'ny mari-pana refesina
Karazana manokana 1: ± 0,5 ℃
Karazana 2 manokana: ± 0.3 ℃
Satria henjana ny fahamendrehan'ny Type manokana dia ilaina ny manana kalibration tena izy amin'ny fotoana tena izy;
Karazana interface: 10 P-2.54 * 2 na 15- FPC
Karazana famoahana sary mafana: ambaratonga volondavenona 16 BITS tany am-boalohany, azo ampiasaina ho fanodinana sary na fampisehoana mivantana
Mode Output 1: ny mari-pana avo indrindra, ny teboka afovoany, ny mari-pana ambany indrindra, araho ny fivoahan'ny sary mafana, koa manohana ny hafanan'ny mpamaky solosaina mpampiantrano amin'ny teboka kisendrasendra
Mode Output 2: famoahana angona angon-drakitra feno;
Field of View (FOV): 33 ° (H) * 33 (V)
Frame Rate: 9-20 fps dia miankina amin'ny fampiharana samihafa
Elanelana: Zavatra 10 cm * 10cm <2 m;
Famantarana ny tarehy: 0,5-0,8 m
Toetra mampiavaka ny herinaratra: 5-9 V ny herinaratra, herinaratra <= 150 mW
Toetra miasa sy fitehirizana:
Temperature miasa: 0-50 ℃
Temperature fitehirizana sy hamandoana: -20 - 80 ℃, 45% RH tsy condensate
Fandeferana ny halaviran-dàlana: ny haben'ny tanjona kendren'ny vatan'ny fanitsiana dia manamboatra ny elanelan'ny kalibration irery, ary ny elanelana misy eo amin'ny 15 sm;
Teo aloha: Ny mari-pana momba ny mari-pana MSA tsy refesi-mandrefy Module sensor infrared thermopile ho an'ny rafitra fanaraha-maso
Manaraka: Temperature Infrared Array Thermopile Sensor Module Manambatra ny sary mafana miaraka amin'ny fakan-tsary YY-32B
Temperature tsy mitongilana mandrefy Array Sensor Mod ...
Temperature infrared Array Thermopile Sensor Mo ...